Kaydka Marijuana Diyaar U Ahay Inay Ka Baxdo Siraad Si Gebi Ahaan Khatar U Tahay • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Saamiyada & Dhaqaalaha Kaydadka Marijuana ee diyaar u ah inay ka baxaan eber una gudbiyaan halista dhabta ah
maqaal by daroogada August 10 2019
Xiisaha maal-gashadayaasha ayaa ka wareegaya shirkado waaweyn oo waaweyn una leh awood weyn. Sababta oo ah muranka iyo fadeexadaha taas oo hogaamiyaasha suuqa Ku lug lahaanshaha, maalgashadeyaashu waxay hadda diiradda saarayaan kaydadka marijuana aan la shaacin ee leh awoodda ay uga gudbi karto eber illaa geesinimada.
1 Sifiican ayaa loo qabtay "DAB"
2 Laga soo bilaabo nafaqada iyo xashiishadda cannabis oo leh Neptune
3 TGOD wuxuu guuleystaa suuqa adduunka
Sare (TSX: DAB), Neptune (TSX: NEPT) (NASDAQ: NEPT) iyo TGOD (TSX: TGOD) ayaa ugu dambeyn soo jiitay. Kuwa xiiseynaya maalgashiga geeska xashiishadda, dhammaan saddexda shirkadood waxay noqon doonaan xulashooyin kale.
Sifiican ayaa loo qabtay "DAB"
Dabka wuxuu dib u soo ceshadaa xooggiisii ​​kadib markii uu lumiyay qeybtii badhtamihii Juun. Shirkadda ayaa heshay horumar la taaban karo ka dib markii ay soo gabagabeeysay heshiis ay kula wareegeyso Truverra. Sare wuxuu maamuli doonaa laba shirkadood oo hoosaad: Canadian Clinical Cannabinoids Inc. iyo Truverra Europe BV Waa sida laba shimbirood oo hal dhagax lagu dilo.
La wareegitaankan istiraatiijiyadeed wuxuu u oggolaanayaa Sare inuu si weyn u kordhiyo joogitaankiisa suuqyada Kanada iyo Yurub. Xarumaha Caafimaadka ee Canadian waxaa loo isticmaali doonaa in lagu soo saaro xashiishadda tayada sare leh, Sare wuxuu adeegsan karaa isla xarumahan si ay u soo saaraan uruurinta iyo saliidaha uumiga.
Sare wuxuu yeelan doonaa xitaa xulashooyin intaa ka badan marka ay shirkaddu dhameystirto la wareegida shatiga shatiga leh ee loo yaqaan 'BlissCo Cannabis'. Maalgashadayaashu waxay ogaanayaan: Sare ma xiiseynayo helitaanka saamiga suuqa ee qaybaha noocyada xashiishka ee jaban. Shirkaddu waxay diiradda saari doontaa suuqyada wax soo saarka ee qiimaha leh halka astaanta horay loogu yaqaanay. Filo in DABKU ololo bilaha soo socda.
Laga soo bilaabo nafaqada iyo xashiishadda cannabis oo leh Neptune
Neptune waa mid ka mid ah kuwa ugu guuleysta warshadaha xashiishka. Ilaa iyo sanadkaan wuxuu ku koray 101,7%, taas oo cadeyneysa in go'aanka maamul ee ka soo wareejinta nafaqada iyo xashiishada uu ahaa mid caqli badan. Nutraceuticals waa alaab laga helo ilo dabiici ah oo salka ku haya cilmiyan dhanka waxtarkooda. Khibrada shirkadda ee soo saarista iyo daahirinta ayaa fure u noqon doonta in horumar laga sameeyo warshadaha sida xawliga ah u koraya.
Neptune wuxuu saxeexay heshiis lagu bixinayo adeegyada koritaanka Canopy koritaanka iyo nadiifinta. Shuruudda mugga waa mid aad u ballaaran, sidaa darteed Neptune wuxuu macaash ka abuuri doonaa shirkadan xiriirka la leh. Laba heshiis oo soo saarid dheeraad ah ayaa lala saxeexay shirkadaha cannabis Tilray iyo TGOD.
Caafimaadka Kanada ayaa sidoo kale Neptune shati u siisay inay ka shaqeyso xashiishadda cannabis, taasoo u oggolaaneysa shirkadda inay dhoofinta alaabada ka soo qaaddo warshadda Quebec. Sababtoo ah Neptune waxay la wareegtay iibiyaha xashiishadda Sugarleaf ee North Carolina, shirkaddu waxay rajeyneysaa inay ka soo saarto $ 150 milyan oo doolar dakhliga ka soo gala suuqyada Mareykanka saddexda sano ee soo socota.
TGOD wuxuu guuleystaa suuqa adduunka
Waxaa jira dhiirrigelin weyn oo maal gashadeyaashu u qaadan karaan The Green Organic Dutchman (TGOD) laga bilaabo hadda laga bilaabo. Caafimaadka Kanada ayaa kordhiyey rukhsadaha Ancaster, Ontario, xarunta shirkadda illaa Agoosto 2022, iyada oo la siinayo TGOD awood ay ku korto, ku shaqeyso oo ay uga iibiso xashiishadda bartaas.
Intaa waxaa sii dheer, aqalka dhirta lagu koriyo ee cagaaran ee loo yaqaan 'Anramaster' aqalka dhirta lagu koriyo ee Ancaster ayaa ku dhow inuu soo gabagaboobo. Dhamaadka Agoosto TGOD waxay kordhin kartaa wax soo saarka waxayna fulisaa qorshaha ganacsiga ee shirkadda. Xarunta xargaha laba jibbaaran ee 166.000 waxay soo saari doontaa 17.500 kiiloogaraam sanadkii. TGOD waxay kaloo eegaysaa dhoofinta adduunka.
Xaqiiqdii, TGOD waxay isu diyaarineysaa inay noqoto shirkadda ugu fiican adduunka ee xashiishadda cannabis. Hawlaha ayaa diiradda lagu saaray suuqyada xashiishadda cannabis ee Kanada, Yurub, Latin America iyo Kariibiyaanka. TGOD sidoo kale waxay ku shaqeyn doontaa suuqa Kanadiyaanka si loogu isticmaalo dadka waaweyn.
Kanada, faa'iidada tartanku waxay ku jirtaa ganacsiga saliidda hemp CBD. TGOD waxay kobcisaa xashiishadda dabiiciga ah ee tayada sare leh waxayna bukaannada caafimaadku ka faa'iideysan karaan waara, dhammaan mabaadi'da dabiiciga ah ee hemp. TGOD waxa ay qorshaynaysaa in ay ku koraan ilaa 219.000 kiiloogaraam tas-hiilaadka wax soo saarka ee saddex waddan.
Ka aqri faahfaahin dheeraad ah 'The Motley Fool' (EN, ilaha)
saamiyadaAmericamaalgelintaCanadacannabisCBDsaliid cbdEuropamaaliyad ahaansharci-dejintadaawada cawskaMaraykankaAdduunka oo dhan
Saliidda CBD ee dhismaha murqaha iyo soo kabashada
CBD Miyay Ka Caawin Kartaa Qalitaanka Wadnaha?